World of Warcraft အတွက် Add-on
Subject: World of Warcraft အတွက် Add-on Sun 26 Jun 2011, 5:27 pm
အခုတလော internet ဆိုင်တွေမှာ world of Warcraft
ဆော့တဲ့သူတွေ တဖြေးဖြေးများလာပါတယ် ။ WOW အခုမှဆော့တဲ့သူတွေ ၊ ၀ါရင့် WOW
သမားတွေအတွက် အသုံးအ၀င်ဆုံး Add-on တွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ် ။ Add-on
တွေ ကိုယ်တိုင်ရှာချင်ရင် [You must be registered and logged in to see this link.] က အစုံလင်ဆုံးပါပဲ ၊၊
မြန်မာနိုင်ငံမှာ လူချင်းတွေ့ရင် မင်း Gearscore ဘယ်လောက်လဲလို့မေးတာ
ထုံးစံလိုတောင်ဖြစ်နေပါပြီ ။ အခု Path 4.0.6 မှာတော့ Average Item Level
ဆိုတာပါလာပြီဖြစ်လို့ gearscore မလိုတော့ပါဘူး ။ ဒါပေမယ့် Path
အဟောင်းသမား ကျနော်တို့အတွက် Gearscore က item တွေကို
အမြန်ဆုံးစစ်နိုင်တဲ့နည်းပါပဲ ။ Gearscore Add-on ကို သွင်းချင်ရင်
Gearscore ဆိုတဲ့ Folder အပြင် Bonus Scanner ဆိုတဲ့ Folder ကိုပါ
တင်နေဆဲသူတွေ ၊ Dungeon တွေ ၊ Raid တွေ ရှာချင်သူတွေအတွက် Cromulent က
အရမ်းအသုံးဝင်ပါတယ် ။ Map ပေါ်မှာ region တစ်ခုကို Mouse တင်လိုက်ရင် အဲဒီ
Region ကို Lv ဘယ်လောက်ကစပြီး ဘယ်လောက်အထိ quest လုပ်လို့ရသလဲ ၊ Instance
တွေရှိဘလဲဆိုတာ ပြပေးပါတယ် ။
3.Deadly Boss Mod
အရင်တုံးက ပြည်တွင်းက server တွေမှာ error တက်နေပြီး Boss တွေက Spell
မသုံးတဲ့အတွက် Deadly Boss Mod(DBM) မလိုပါဘူး ။ အခုတော့ Boss တွေက Spell
တွေ ရက်ရက်စက်စက် သုံးလာပြီဖြစ်တဲ့အတွက် Raid တစ်ခုကို အောင်အောင်မြင်မြင်
run ချင်ရင် DBM က မရှိမဖြစ်လိုပါတယ်။
ICC မှာ Lord Marrowgar က Bone Storm ကို ဘယ်နမိနှစ်နေရင်လှည့်မလဲဆိုတာတွေ
Bone Spike က ဘယ်တော့ ပေါ်လာမယ်ဆိုတာတွေကို Screen ရဲ့ ညာဘက်ခြမ်းမှာ Timer
လေးနဲ့ ပြပေးပြီး Spell သုံးတဲ့အခါ ၀ရုန်းသုံးကားမဖြစ်အောင်
Dungeon Tank တွေအတွက် Taunt Master ကအရမ်းအသုံဝင်ပါတယ် ။ Aggro
လွတ်သွာပြီး ကိုယ့် group ထဲက တစ်ယောက်ယောက်ကို သွားချရင် taunt ခံရသူကို
အနီရောင်နဲ့ပြပြီး အဲဒါကို နှိပ်လိုက်တာနဲ့ သူချနေတဲ့သူကို taunt
လုပ်လိုက်ပါတယ် Pally. DK, Warrior နဲ့ Druid တွေအကုန်လုံးအတွက် Setting
တွေ ချန်ထားပေးပြီး ကိုယ့်ဟာကိုယ် ပြန်ပြင်လည်းရပါတယ် ။
Path 3.3.5 မှာ Quest တွေကို trace လုပ်တဲ့ feature ကို Blizzard က
ထည့်ပေးလိုက်ပြီဖြစ်ပေမယ့် အခုမှ စဆော့သူတွေအတွက်တော့ Quest Helper
ကပိုပြီး အသုံးဝင်ပါတယ် ။
6.Atlas Loot Enhance
wow မှာ item တစ်ခုရှာချင်တိုင်း Internet ပေါ်တက်ရတာ ပင်ပန်းပါတယ် ။ Atlas
Loot ထည့်ထားလိုက်ရင် Boss တွေအကုန်နီးပါး ဆိကကျတဲ့ Item တွေအပြင်
Blacksmithing တို့ Inscription တို့လို profession တွေကလုပ်တဲ့ item
တွေကိုပါရှာနိုင်ပြီး ပြုလုပ်ရင်လိုအပ်မယ့် material
တွေကိုပါတစ်ခါတည်းပြပေးပါတယ် ။ ltem Level ကိုပါပြပေးပြီး GM တွေ အတွက်
Item ID ပါ ပါပါတယ် ။
5 man dungeon တွေမှာ healer တွေသိပ်ပြီးအလုပ်မရှပ်ပေမယ့် raid တွေ
Battleground တွေ ကျရင်အရမ်းအလုပ်ရှပ်ပါတယ် ။ Healbot ထည့်ထားရင် heal
ရတာ အရမ်းကို သက်သာပြီး နောက် healbot မရှိရင်
မဖြစ်ဘူးဆိုတာသဘောပေါက်သွားပါလိမ့်မယ် ။ Healbot ထဲမှာ ကိုယ့် Group
ထဲကသူတွေရဲ့ နာမည်လေးတွေနဲ့ အကွက်လေးတွေရှိပြီး အဲဒီ
အကွက်လေးတွေကိုနှိပ်လိုက်ရုံနဲ့ heal ပါတယ် ။
ဥပမာ - Paladin
Healer ဆိုရင် left click နဲ့နှိပ်ရင် Flash heal , right Click
နဲ့နှိပ်ရင် Holy Light , Shift + left click နဲ့နှိပ်ရင် Cleanse စသဖြင့်
ကိုယ့်စိတ်ကြိုက် key bind ထားလို့ရပြီး curse ၀င်နေသလားဆိုတာကိုပါ
က wow ရဲ့ spell တွေ cast လုပ်ရင်ပေါ်လာတဲ့ bar တန်းကိုအစားထိုးတာဖြစ်ပြီး
အရမ်းအသုံးဝင်ပါတယ် ။ သူက ရန်သူအပေါ်တင်ထားတဲ့ curse တွေ ၊ disease တွေ ၊
mark တွေကို timer နဲ့ ပြပေးင်္ပြိး ကိုယ့် spell cast လိုက်ရင် ဘယ်လောက်
lag နေသလဲဆိုတာပါ ပြပေးပါတယ် ၊ အသုံးအ၀င်ဆုံးကတော့ hunter တွေနဲ့ တခြား
meFather (swear) တွေမှာ ဘယ်တော့နေရင် Auto-attack ထွက်မယ်ဆိုတာပြပေးပြီး
Hunter တွေဆိုရင် Auto-attack Timer ပြည့်တာနဲ့ ခဏလေး ရပ်လိုက်ရင်
မြားထွက်သွားမှာ ဖြစ်င်္ပြီး Battleground တွေမှာ သိပ်အသုံးမတည့်ပေမယ့် level
တင်တဲ့အခါမှာ အသုံးဝင်ပါတယ် ။
Partz ကတော့ ကိုယ့်ကိုလာ chat သူရဲ့ (swear) နဲ့ level ကိုပြပေးပါတယ် ။
(swear) ဆိုတာက DK က ကိုယ့်ကိုလာ chat ရင်အနီရောင်နဲ့ ပြထားပေးမှာဖြစ်ပြီး
အဲဒီ chat စာသားတွေကို copy ကူးယူလို့ရပါတယ် ။
Onebag က အိတ်တွေအကုန်လုံးကို တစ်အိတ်ထည်းအနေနဲ့ ပေါင်းပြီးပြပေးတဲ့
Add-on ဖြစ်ပြီး bagnone ထက်ပိုပေါ့ပါတယ် ။ ပြီးတော့ bagnone လိုလည်း
မျက်စိမရှတ်ဘဲ ကြည့်လို့ကောင်းပါတယ် ။
11.Geathrer or Geathermate
အဲဒီ Add-on နှစ်ခုထဲကကြိုက်တဲ့တစ်ခုကိုသုံးနိုင်ပြီးပါတယ် ။ သူတို့က
ကိုယ်အပင်နှုတ်ခဲ့ ၊ မိုင်းတူးခဲ့တဲ့နေရာကို မှတ်ထားပေးပြီး
နောက်တစ်ခါပြန်လာရှာတဲ့အခါ အရမ်းအဆင်ပြေပါတယ် ။ WOW မှာ ore တွေ ၊
အပင်တွေရဲ့ ၇၀ ရာခိုင်နှုန်း ကျော်ကျော်က ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာမှာ
ပေါ်ပြီး ကျန်တဲ့ random တွေကလည်း အရင်ပေါ်ခဲ့တဲ့နေရာရဲ့ အနီးအနားမှာပဲ
ပြန်ပေါ်တာဖြစ်လို့ Geathrer တွေအကြိုက်တွေ့မှာပါ ။ မကောင်းတာတစ်ခုက အဲဒီ
Data တွေကို စက်တစ်လုံးထဲမှာပဲ save လုပ်ထားပြီး စက်ပြောင်းရင်
Subject: Re: World of Warcraft အတွက် Add-on Sun 26 Jun 2011, 6:26 pm
Thank you! Prof.Dr.Banana
Subject: Re: World of Warcraft အတွက် Add-on Sun 26 Jun 2011, 6:33 pm
hehe..dnt mention that much bro..he is my close friend
Last edited by Bane on Wed 29 Jun 2011, 6:30 pm; edited2times in total
Subject: Re: World of Warcraft အတွက် Add-on Mon 27 Jun 2011, 9:43 pm
Titanbar isabit helpful too
Subject: Re: World of Warcraft အတွက် Add-on Tue 28 Jun 2011, 9:53 pm
Everything is Helpful bro~
Subject: Re: World of Warcraft အတွက် Add-on Wed 29 Jun 2011, 8:49 am
Subject: Re: World of Warcraft အတွက် Add-on Wed 29 Jun 2011, 6:15 pm
ကို Kaz From Zangarmarsh ကဘယ်မှာPlayတာလည်းချင်ဗျာ
Subject: Re: World of Warcraft အတွက် Add-on Wed 29 Jun 2011, 6:31 pm
pyin lite tar .. DUEL mal he kg twe
Subject: Re: World of Warcraft အတွက် Add-on Sun 03 Jul 2011, 9:39 am
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်>.........hack ချင်တယ်ဘယ်လို လုပ်ရတာလဲသိလား
Subject: Re: World of Warcraft အတွက် Add-on Sun 03 Jul 2011, 10:47 am
Hackချင်ရင်EmuကိုDownလိုက် Cheat Topic ထဲမှ WOW Topic ထဲဝင် Downပါ
Subject: Re: World of Warcraft အတွက် Add-on Sun 03 Jul 2011, 11:23 am
ယခုန WOW Hack လိုချင်တဲ.အကို
ဒီမှာ Download လုပ်နိုင်ပါတယ်
Subject: Re: World of Warcraft အတွက် Add-on Sun 03 Jul 2011, 11:38 am
Anyone knows any PvP add ons?? cuz i (swear) at PvP
Subject: Re: World of Warcraft အတွက် Add-on Sun 03 Jul 2011, 4:21 pm
I don't know about add ons , I do know about skills
Subject: Re: World of Warcraft အတွက် Add-on Sun 03 Jul 2011, 7:09 pm
Whichever class would be nice
I play mostly Hunter, Priest, DK and Pally depending on what my guild need me to be on PvE
PvP is not my strong point
any tip you have would be nice
Subject: Re: World of Warcraft အတွက် Add-on Sun 03 Jul 2011, 11:26 pm
Recount is useful asagood dps/heal etc meter
Subject: Re: World of Warcraft အတွက် Add-on Mon 04 Jul 2011, 10:07 pm
Use Pallypower for Paladin
Subject: Re: World of Warcraft အတွက် Add-on Tue 04 Oct 2011, 1:05 am
AsaWarrior tank (some of the time) I use "Tidy Plates" add on with threat extension.
If you set it to tank mode, the health bars on mobs turn green if you are holding aggro, it shows red if you don't have aggro and it shows yellow if you are about to loose aggro. I find it very helpful.
If you areatank you should also use "Tank points" add on for checking your tanking gear to help compare which pieces of armor are better for tanking.
For alot of the classes I think "Sexy Cooldown" is nice especially for hunters range dps. When your spells are ready you can actually see them coming off the cooldown unlike Quartz which only shows cooldown time left.
Quartz is still good for tracking buffs and debuffs and cast bars.
OmniCC add on is also good it shows cool down timer on your spell buttons if your need to see more cooldown timers. If not don't worry about it.
If you really want more help on better dps, heals, threat as tank, the add on call "Spell flash" is good. It shows and lights up your next most important spell to help you achieve more dps/heals output. Spell flash has sub addons for all classes and specs so you should download all that relates to your class.
"MikScrollingBattleText" now this allows you to modify your battle texts so that they are not everywhere on the screen. Your damage, your crits, your procs, damage taken, buffs gained, debuffs gained, heals received, heals casts. You can place where you want them to show and you can also change fonts, font sizes and colors through its available options.
For raid healers get "GRID" addon. I think most of you already know this addon as almost all raiders use this addon to track the raid members. If you find the sub addons for GRID, you can also add mana bars, their status, their debuffs so that you can track the debuffs on your raid members and get them dispelled or just get rid of them ASAP.
I'll help post some more when I have more hope this helps
Subject: Re: World of Warcraft အတွက် Add-on Tue 04 Oct 2011, 1:14 am
Thanks for the tanking macro dude
that will help mealot with my tanking
Subject: Re: World of Warcraft အတွက် Add-on Tue 04 Oct 2011, 1:17 am
i mean add on
Subject: Re: World of Warcraft အတွက် Add-on Tue 04 Oct 2011, 1:20 am
Subject: Re: World of Warcraft အတွက် Add-on Tue 04 Oct 2011, 1:35 am
Oh I forgot2addons.
Use Skada Damage meter instead of Recount.
I say this because Skada does the same thing as recount but Skada is more light weight (as in data size) so this reduces lags and memory usage while in raids. If you don't have lagging problems then don't worry about it.
2nd one is called Addon control panel, it lets you turn your addons on and off while in gameplay (not while you are on your char list page) and also you can make/save profiles so that you don't have to manually click your addons to turn them on or off.
For example lets just say you are inacity and you wanna have your trading addons, choose all trade addons that you want on and save as trade profile. And when you are about to raid you'd wanna turn off all unnecessary addons and only have combat and raid related addons to stay on, then choose those addons and save as Raid/combat profile.
By doing that now you can toggle the addon profiles without needing to log off.
Subject: Re: World of Warcraft အတွက် Add-on Tue 04 Oct 2011, 6:46 am
oh. Thanks for sharing sir!
Subject: Re: World of Warcraft အတွက် Add-on